Inqubomgomo Yobumfihlo - hannari-shop
Ukumaketha nge-imeyili: Ngemvume yakho, singakuthumela ama-imeyili mayelana nesitolo sethu, imikhiqizo emisha, nezinye izibuyekezo.
Ngokusebenzisa iwebhusayithi yethu, wena (isivakashi) uyavuma ukuvumela abantu besithathu ukuthi bahlaziye ikheli lakho le-IP, ukuze banqume indawo yakho ngenhloso yokuguqulwa kwemali. Uyavuma futhi ukuthi leyo mali igcinwe kwikhukhi yeseshini kusiphequluli sakho (ikhukhi yesikhashana ekhishwa ngokuzenzakalelayo uma uvala isiphequluli sakho). Senza lokhu ukuze i-currency ekhethiwe ihlale ikhethiwe futhi ihambisana njalo uma upheqa iwebhusayithi yethu ukuze amanani angadlulisela kuye (isivakashi) lwemali yendawo.
Uma sicela imininingwane yakho ngesizathu sesibili, njengokuthengisa, sizokubuza ngokuqondile imvume yakho evezwe noma sikunike ithuba lokuthi cha.
Uma ngemuva kokungena ngemvume, uguqula ingqondo yakho, ungahoxisa imvume yakho yokuxhumana nawe, ukuthola iqoqo eliqhubekayo, ukusetshenziswa noma ukudalulwa kwemininingwane yakho, nganoma yisiphi isikhathi, ngokuxhumana nathi ku-tourourwebsite@hannari-shop.com .
Idatha yakho igcinwa ngesitoreji sedatha ye-Shopify, yolwazi, kanye nohlelo lokusebenza jikelele lwe-Shopify. Bagcina idatha yakho kuseva ephephile ngemuva kwe-firewall.
Uma usinikeza ngolwazi lwakho lwekhadi lesikweletu, ulwazi lubethelwe ngokusebenzisa ubuchwepheshe bokubheka obusondelene (SSL) futhi bugcinwe ngokubethela kwe-AES-256. Nakuba kungekho ndlela yokudlulisela phezu kwe-intanethi noma isitoreji se-elekthronikhi i-100% ivikelekile, silandela zonke izidingo ze-PCI-DSS futhi sisebenzisa amanye amazinga embonini evunyelwe ngokuvamile.
Uma ungathanda: ukufinyelela, ukulungisa, ukuchibiyela noma ukucisha noma yiluphi ulwazi lomuntu siqu esinalo ngawe, ukubhalisa isikhalazo, noma uvele ufuna imininingwane engaphezulu thinta Isikhulu Sokuvumelana Ngobumfihlo ku-tourourwebsite@hannari-shop.com